Protein Whey: Chọpụta uru nke mgbakwunye a!
Basic oriri na-emekwa ka ahụ ike: Mụta ihe ha bụ na otú na-eri ha!
Ihe mgbakwunye	 2 May 2019
Protein Whey: Uru maka Hypertrophy, Ahụike na Ọnwụ Ibu
Otu n'ime ihe kachasị ewu ewu na ụwa niile bụ Whey Protein. Ọ kachasị mma maka ndị chọrọ ịbawanye ogo ahụ ma enwere ọdịiche dị iche iche maka ndị na-amalite na-arụ ọrụ ahụ na ndị agadi.
Ekwenyesiri m ike na ị nụla banyere Whey Protein, ọbụlagodi na ị naghị etinye aka na ụwa egwuregwu. Nke ahụ bụ n'ihi na, ọtụtụ ndị dọkịta na ndị na-edozi ahụ na-akwado mgbakwunye a maka ndị mmadụ nkịtị, n'ihi ọtụtụ uru ahụike ya.
Na mgbakwunye, enwere uru ọzọ metụtara na iji mgbakwunye a: ọnwụ ọnwụ. Otú ọ dị, ọ dị mma mgbe niile ime ka o doo anya na ọ bụ naanị na-enyere aka n'ọkụ abụba, n'ihi na nke a abụghị ọrụ ya, n'ihi na e nwere thermogenics.
N'ihi ya, m na-akpọ gị òkù ka ị mara nke ọma uru niile Whey Protein na-enye onye ọrụ ya, ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtachaghị ìhè, na mgbakwunye na ịmara mmetụta ndị nwere ike ịbịara site n'iji ya eme ihe na mmegide.
Ị dịla njikere? Ya mere, ka anyị pụọ!
Gịnị bụ whey protein?
Whey protein bụ ihe mgbakwunye nri nwere uru dị ukwuu nke sitere na whey protein. N'ime ya, enwerekwa amino acid dika Glutamine, Arginine, na mgbakwunye na ngalaba amino acid (BCAA) nke bu Leucine, Isoleucine na Valine.
E nwere ụfọdụ ọdịiche dị na Whey Protein nwere njirimara nke ha dịka Concentrate, Isolated, Hydrolyzed, 3W and even Female Whey Protein.
Uru maka uru anụ ahụ
Protein bụ isi na-arụ ọrụ maka nrụpụta akwara na mgbake. Mgbe anyị na-eme mmega ọzụzụ ọzụzụ dị arọ, akwara anyị na-ata ahụhụ ọtụtụ mmerụ micro nke na-agbanweghachi n'oge oge ezumike gị.
Protein Whey ga - eme ka akwara a dịghachi ọhụrụ, na - eme ka uru ahụ na - eto ngwa ngwa.
Tụkwasị na nke a, mgbakwunye a na-enye mgbaze ngwa ngwa, nke bụ otu n'ime uru ya. Ihe mejupụtara protein bụ ọtụtụ ụdị amino acid na, mgbe etinyere ngwa ngwa, amino acid a na-abanye n'ọbara ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Otu n’ime amino acid bụ isi nke protein bụ leucine. Ọ bụ amino acid dị mkpa (nke ahụ anyị na-adịghị emepụta) nke na-arụ ọrụ ozugbo na nwughari nke eriri akwara, si otú a na-eweta hypertrophy ka mma.
Uru ndị ọzọ Whey Protein na-ekwe nkwa na ahụ anyị bụ ume na ntachi obi nkịtị, belata ike ọgwụgwụ (ike ọgwụgwụ), na-egbochi mgbu akwara mgbe ọzụzụ gasịrị, n'etiti ihe ndị ọzọ na-emeziwanye ọzụzụ ọzụzụ na, n'ihi ya, nweta nsonaazụ.
Whey Protein abụghị ihe mgbakwunye maka ndị na - arụ ọrụ ahụ, ya bụ, ụdị mmadụ ọ bụla nwere ike iri ya, ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa ma na ha na-asọpụrụ ntuziaka nke ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị na-edozi ahụ maka iji.
Otu n'ime uru bara uru nke Whey Protein metụtara ahụike, anyị nwere ike ịkọwapụta:
Na-enyere aka n'ịgwọ ụkwara ume ọkụ;
Na-egbochi nsogbu obi;
Na-enyere aka ịchịkwa ọkwa cholesterol;
Na-enyere aka ịchịkwa glucose ọbara;
Na-enyere aka ịchịkwa ọbara mgbali;
Tinyere ndị ọzọ.
Isi ihe ọzọ ekwesịrị ịkọwapụta banyere Whey Protein bụ na ọ na-eweta ụfọdụ uru maka ndị nwere nje HIV. Ọ na - egbochi mkpụrụ ndụ nje ka ọ ghara imebi uru anụ ahụ ma tufuo oke akwara.
Na mgbakwunye, glutamine dị na Whey na-enyere aka ịbawanye ọgụ nke nwere nsogbu ntoputa nke nje ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bu nje HIV, a na-atụ aro ka ị jụọ maka ndụmọdụ ahụike tupu i jiri ya.
Uru maka ọnwụ
Agbanyeghị na Whey Protein abụghị naanị maka abụba na-ere ọkụ, enwere ụfọdụ ihe metụtara oriri ya.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị jiri mgbakwunye a yana nri kwesịrị ekwesị na ọzụzụ kwesịrị ekwesị, metabolism anyị na-arụ ọrụ ngwa ngwa. N’ụzọ dị otu a, ahụ anyị ga - agba abụba karịa.
Na mgbakwunye, egosiri na sayensị na Whey Protein nwere ike inyere aka ịchịkwa afọ ojuju, ọkachasị nwanyị Whey nke nwere soy protein na ngwakọta ya. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga - eri naanị ihe ịchọrọ, na - ezere nri ndị nwere calorie dị elu na ụdị nzuzu ndị ọzọ na - eme gị abụba.
Ọ dị mkpa ime ka o doo anya na ọ bụghị naanị ụdị Whey Protein ọ bụla kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla na-eri nri dị arọ. Dịka ọmụmaatụ, Whey Concentrate nwere naanị 70 ka 80% protein nwere ogo dị elu nke abụba na carbohydrates.
Ya mere, nke kachasị adaba n'ọnọdụ ndị a bụ Whey Isolated, nke nwere 90% nke protein na ọdịnaya dị ala nke abụba na carbohydrates.
Nakwa, kpachara anya na oke Whey Protein, n'ihi na protein dị ukwuu na ahụ nwere ike gbanwee ghọọ abụba a na-ahụkarị, nke na-adịghị amasị ndị ọ bụla chọrọ ibu ibu.
Mmetụta na contraindications
Dịka anyị hụworo, Whey Protein sitere na protein whey yana ọtụtụ nsụgharị ya nwere lactose. Ya mere, ndị na-anaghị anabata ọgwụ disaccharide a (lactose) kwesịrị izere oriri ya, ma ọ bụghị ya, ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ nwere ike ibilite, dịka:
Ahụhụ erughị ala;
Womenmụ nwanyị dị ime kwesịrị izere iji ya eme ihe, ebe ọ bụ na ngwakọta nke mgbakwunye a nwere ike ọ gaghị adị mma maka nguzobe nwa. Ọzọkwa, ndị nwere akụrụ, umeji ma ọ bụ ọrịa ọ bụla kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta tupu ojiji.
Ugbu a ị matara uru niile Protein Whey nwere ike ị nweta maka uru bara ụba, ahụike yana ọbụlagodi ịdị arọ, kedụ ihe ị na-eche ịzụta ite gị n’isi nso?
Na-asọpụrụ ọnụego nke ndị nrụpụtara ma ọ bụ onye na-edozi ahụ na-atụ aro gị yana ịmara mmegide. Site n'ime nke a, ị nwere ike izere nnukwu nsogbu ahụike.
Wantchọrọ ịmụtakwu banyere ọtụtụ ụdị mgbakwunye ndị ọzọ? Ekwadoro m gị Pịa ebe a ma nweta Atụmatụ Ndụ, nke nwere isiokwu kwa ụbọchị na nhazi ahụ, mgbakwunye, ọzụzụ na ndị ọzọ!
Onye na -edozi ahụ bụ Larissa Scharf - CRN 21101878/P
Aromatherapist na Psychoanalyst Nutritionist
Pụrụ iche Ọgwụ/Egwuregwu/Hytotherapy
Av.Abelardo Bueno 3300 Ụlọ 905
ONLINE NA NTANYA
Hụ ihe ndị edemede dere
tinye Comment Cancelar resposta
Zọpụta data m na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m ga-aza.
Lipostabil - Mara ihe ọ bụ, uru ma ọ bụrụ na ọ dị njọ maka ahụike gị!
Chickpeas: Lee uru na otu ị ga-esi kwadebe nri a n'ụlọ!
Lentils: Chọpụta ụdị, agba, okpokoro nri na otu esi eme ya!
Quitoplan - Mgbakwunye dị ike nke na-enyere aka belata oke ibu na Brazil.
kolaji - Nnukwu ihe mgbakwunye nri nke mejupụtara collagen, nke a na-akpọkwa "Botox in Capsules"
Duratron - Ngwaahịa okike nke kwere nkwa ịkwụsị nsogbu nwoke.
volkano - A cream thermogenic na-enwe nnukwu ihe ịga nke ọma na gyms na Brazil.
na-eti obi mgbawa
MCT: Kedu ihe ọ bụ? Gịnị ka ọ bụ maka? Ihe niile ị chọrọ ịma bụ ebe a!
Egwuregwu na-edozi ahụ: know ma ihe otu bụ na mkpa ọ dị? Chọpụta ebe a!
Blue November: Kedu ihe ọ bụ? Gịnị bụ nzube ya? Olee otú iji gbochie?
Nwanyị Lavitan: Chọpụta uru nke mgbakwunye a!
Kimera: Ebee ka izu? Olee uru ọ bara? Gịnị mejupụtara? N'ezie na-arụ ọrụ? Anyị na-agwa gị ihe niile!
Saxenda: Ọgwụ ọjọọ nke ANVISA wepụtara!
Kedu otu esi eme ka mbọ gị too ngwa ngwa ma sie ike? Lee ụfọdụ Atụmatụ!
Dianabol: Ihe niile gbasara Otu n'ime Anabolics Kacha ewu ewu!